Ukusebenzisa injini yokusesha nokuhambisa: ingabe lezi zici ezimbili azihlukaniseki?
Yebo, ngiyaqiniseka ukuthi kukhona ubuhlobo obuthile phakathi kokusebenza kwe-injini yokusesha nokuhambisa. Kodwa ingabe lezi zici ezimbili empeleni ziyahlukaniswa? Ngicabanga hhayi. Ukuze ziqonde ngokucacile, zombili zazo zazivame ukuhlukaniswa. Kodwa lezo zikhathi zadlula isikhathi eside. Eqinisweni, eminyakeni eminingana eyedlule kwakukhona iphuzu elidingekayo ekuthuthukiseni injini yokusesha nokuzithoba kuza ngesandla - ducray melascreen skroutz. Ngisho ukuthi isu lakho le-SEO lingathathwa isinyathelo kuphela ngemuva kokuthi uhambise ngokugcwele injini ethile yokusesha (i. e. , kwakufanele unikeze isaziso somuntu ngamunye, ukwazisa i-Google noma i-Bing ukuthi iwebhusayithi yakho esanda kuqalwa isilungele ukukhomba).
Kodwa manje ukusebenza kwenjini yokusesha kanye nezinqubo zokuhambisa kukhona izinto ezihluke ngokuphelele. Ngisho, ngenkathi umqondo ophakathi we-SEO uhlala njalo, ukuzithoba ngokwakho sekuvame ukugcwaliswa ngokuzenzakalelayo noma ngabe ngabe kuyindlela ehamba phambili. Ngemuva kwakho konke, konke okudingayo mayelana nokuthunyelwa kwenzelwa isheke lokufaka okuphelele nge-injini yokusesha.
Inqubo ngokwayo ayikaze inikeze igumbi nganoma yini efana nokubuza "noma" ukutshela "izinjini zokusesha oyifunayo, isibonelo, ukuba zibekwe eziphakeme ngamanye amagama angokhiye. Eqinisweni, ayikho indlela yokuphoqa izinjini zokusesha ukuba zihlanganise amakhasi akho zibe phezulu-10, noma ezinye izikhundla emiphumeleni yabo yosesho (okungenani, ngaphandle kokuphula izinkombandlela zabo ngokusebenzisa amasu we-Black-Hat SEO noma noma yiziphi izinhlelo ezihlukile ezingekho emthethweni ukuze kusetshenziswe ukuhlelwa kobuchule babo bokusesha). Ukuze nje siphelele, singathonya isikhundla esithile sekhasi ngokufaka isicelo sokukhangisa nge-pay-per-click, okuzoboniswa ngaphakathi kokufakwa ohlwini kokukhokhelwa kokuqala ngaphezulu. Iningi labasebenzisi, noma kunjalo, lizobe selibaqaqa ngokuya ohlwini lwama-organic search kuphela.
Ngakho, ake sibuyele esihlokweni ukuze sithole isinqumo sokugcina ekuthuthukiseni injini yokusesha nokuhambisa. Futhi, inqubo yezincwadi zokuhambisa ingasetshenziswa nje ukunikeza isignali ukuthi amakhasi akho amasha ayelungele ukukhomba ngabakwa-crawlers. Futhi manje iyahamba ngokuzenzakalelayo ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Ukuze uyihlole, futhi uqinisekise ukuthi amakhasi akho atholakele ngempumelelo izinjini zokusesha, konke okudingayo ukuya kubha yokusesha ukugcwalisa nge-URL yekhasi lakho lasekhaya (isibonelo, www. YouHomePage. com). Ngaleyo ndlela, uma ubona amakhasi akho aboniswa kuhlu lokusesha, konke kulungile. Ngakho-ke, ubona ukuthi iwebhusayithi yakho izobe igcine igxilwe yi-Google, noma ngabe awukwenzi lutho ngenhloso, ubuningi phakathi kwamasonto amabili. Ngempela, ukukhomba okuphelele (yebo, kuye ngokuthi inani lakho lewebhu lewebhu) kuthatha cishe isonto noma kunjalo. Isiphetho
Phawula, Nokho, ukuthi kukhona enye inqubo, ngandlela-thile okuthiwa "ukuthunyelwa" noma "ukubhalisa" ku-1)
injini yokusesha. Ngisho ukudala i-akhawunti yekhasi lakho lebhizinisi ku-Google +. Inhloso yenkambiso ihlinzeka ngezinzuzo ezithile zesimo ngokwakha ukwethemba okungcono nokuqashelwa yi-injini yokusesha. Noma kunjalo, abantu bathi ukuqedela ukubhalisa ku-Google + kungakhonza ukucela inqubo eseduze ngokushesha yokukhomba.